သူမရိုက်ကူးခဲ့သမျှ ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကအမှတ်တရလေးတွေကိုချပြရင်း ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး - Cele Connections
သွက်လက်ချက်ချာပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးက Beauty Blogger တစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါ အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး “ရန်သူ”၊ “ဧည့်သည်”၊ “ပုရိသ”၊ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေအပြင် “အိပ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အပြိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း နေခြည်တစ်ယောက် တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူမရဲ့ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ အိုက်တင်အမူအယာလေးတွေကြောင့် ရုံပြည့်ရုံလျှံတဲ့အထိ အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ နေခြည်ဦးက သူမရဲ့ ရုံတင်ပြီးသား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ “ပုရိသ”၊ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” နဲ့ “အိပ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်” ဇာတ်လမ်းတွဲ ဇာတ်ဝင်ခန်း ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကအမှတ်တရလေးတွေကိုချပြရင်း “Producers များ တင်ခွင့်ပြုပါနော်။ ရုံတင်ပြီးသား ကားလေးတွေရဲ့ BTS လေးတွေပါ။ ဖုန်းထဲမှာ တွေ့လိုက်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ အရမ်းလွမ်းသွားလို့ပါ 😭😭😭😞😞 ဘယ်ကားထဲက BTS လေးတွေလဲ chillies ??” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တွေ ဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာတွေရှိပေမယ့် ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် ကြော်ငြာနဲ့ သီချင်း MV စတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသာ လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း နေခြည့်ရဲ့ နောက်ထပ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူမရိုကျကူးခဲ့သမြှ ဇာတျကားတှရေဲ့ ရိုကျကှငျးနောကျကှယျကအမှတျတရလေးတှကေိုခပြွရငျး ပရိသတျတှကေို မေးခှနျးထုတျလာခဲ့တဲ့ နခွေညျဦး
သှကျလကျခကျြခြာပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ နခွေညျဦးကတော့ တဈနိုငျငံလုံးက မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးက Beauty Blogger တဈယောကျအဖွဈကနေ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျအဖွဈပါ အောငျမွငျလာခဲ့ပွီး “ရနျသူ”၊ “ဧညျ့သညျ”၊ “ပုရိသ”၊ “အခမျးနားဆုံးမတ်ေတာ” စတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှအေပွငျ “အိပျမကျတှမေိုးထားတဲ့အိမျ” ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတှနေဲ့အပွိုငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး နခွေညျတဈယောကျ တကျသဈစသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ သူမရဲ့ ကြှမျးကငျြလိမ်မာတဲ့ အိုကျတငျအမူအယာလေးတှကွေောငျ့ ရုံပွညျ့ရုံလြှံတဲ့အထိ အားပေးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ နခွေညျဦးက သူမရဲ့ ရုံတငျပွီးသား ရုပျရှငျဇာတျကားတှဖွေဈတဲ့ “ပုရိသ”၊ “အခမျးနားဆုံးမတ်ေတာ” နဲ့ “အိပျမကျတှမေိုးထားတဲ့အိမျ” ဇာတျလမျးတှဲ ဇာတျဝငျခနျး ရိုကျကှငျးနောကျကှယျကအမှတျတရလေးတှကေိုခပြွရငျး “Producers မြား တငျခှငျ့ပွုပါနျော။ ရုံတငျပွီးသား ကားလေးတှရေဲ့ BTS လေးတှပေါ။ ဖုနျးထဲမှာ တှလေို့ကျတော့ ရုပျရှငျရုံတှေ အရမျးလှမျးသှားလို့ပါ 😭😭😭😞😞 ဘယျကားထဲက BTS လေးတှလေဲ chillies ??” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေို မေးခှနျးထုတျလာခဲ့ပါတယျ။
နခွေညျဦးကတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈတှေ ဆကျလကျရိုကျကူးဖို့ စာခြုပျခြုပျဆိုထားတာတှရှေိပမေယျ့ ကပျရောဂါအခွအေနတှေကွေောငျ့ ကွျောငွာနဲ့ သီခငျြး MV စတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုသာ လုပျကိုငျနလေကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး နခွေညျ့ရဲ့ နောကျထပျ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို စောငျ့ကွညျ့အားပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။